Iindaba - Imbali kunye noPhuhliso lweKhalibhultha yoBushushu obuBomileyo Imbali kunye noPhuculo lweKhalifriyitha yoBushushu boBomisi |
Imbali kunye noPhuculo lweCalibrator yoBushushu boBushushu
Isibane somlilo esomileyo, esaziwa njengeDry Well Furnace, yindawo ephathekayo yokuPhatha ubushushu beBhalbhu. Ubushushu beBhalbhu esomileyo busetyenziswa kakhulu ebaleni okanye kulungelelwaniso lobushushu belebhu. Xa kuthelekiswa nesixhobo sokuhlamba ulwelo lobushushu bendalo, i-Dry Block Ubushushu beCalibrator isebenzisa umzimba owomileyo ukufudumeza okanye ukupholisa, okuphucula kakhulu isantya sokuphakamisa nokupholisa, kwaye kunciphisa kakhulu umthamo wezixhobo, onokuhlangabezana neemfuno eziphathwayo. kwisicelo sentsimi.
Ubushushu beBhalbhu yokuQala kweBushushu yokuqala eyomileyo yazalelwa eDenmark, isetyenziswa enqanaweni xa kuhanjwa ngenqanawa ukuqinisekisa ukhuseleko lwazo zonke iinkqubo kunye nokuhlangabezana neemfuno zokulinganisa ubushushu ezichanekileyo. Njengelizwe eliphuhlileyo elinomzi mveliso wokuhambisa ngenqanawe, iDenmark ibiyinkokeli kwindawo yetekhnoloji yokwakha iinqanawa ukusukela kwiminyaka yeViking. Namhlanje, amashishini okuhambisa kunye nokwakha iinqanawa aseDenmark asadlala umqulu obalulekileyo emhlabeni. Inqanawa ehamba ngokuzimela elwandle iyafana nefektri encinci, eneseti yayo yokuvelisa, iyunithi yamandla, inkqubo yenkxaso yobomi, inkqubo yokunyanga amanzi, inkqubo yokulahla inkunkuma njalo njalo. Ukuqinisekisa ukusebenza kwesiqhelo kwezi nkqubo kubaluleke kakhulu ukulungelelanisa izikhombisi zeenkqubo ezifanelekileyo rhoqo.
Izixhobo zokulinganisa eziqhelekileyo zihlala zinobunzima kwaye zinzima, azilungelanga ukuthwala inqanawa Ngokusekelwe kule meko ingentla, ngo-1984, isiDanish uJohanna Schiessl kunye nomyeni wakhe uFrank Schiessl ngokudibeneyo basungula iziko lokuqala lomlilo elomileyo, kwaye ngokudibeneyo bamisela isixhobo seJOFRA ukuvelisa iziko lokuqala lomlilo elomileyo phantsi kwamagama abo.
Umgaqo osisiseko weziko elomileyo (uhlobo lobushushu lobushushu besilinganisi) ilula. Ishushu okanye ipholisa ibhloko yentsimbi kubushushu obumiselweyo kwaye igcina iyunifom yobushushu kwaye izinzile.Ibhlokhi yesinyithi eshushu eshushu sisebenza njengendawo yokubonelela ngendawo yokuhlengahlengisa, efanayo neyomeleleyo yeqondo lobushushu kwisenzeli esilinganisiweyo sokulinganisa isivamvo sobushushu esilinganisiweyo.